Rantabe, Maroantsetra : mpandeha 8 navadiky ny lakana, zandary iray tsy hita popoka | NewsMada
Rantabe, Maroantsetra : mpandeha 8 navadiky ny lakana, zandary iray tsy hita popoka
Anisan’ireo mpandeha efatra mbola karohina, vokatry ny fivadihan’ny lakana nitondra azy ireo, ny alatsinainy teo, ny komandin’ny poste avancé an’ny zandarimariam-pirenena ao amin’ny kaominina Rantabe Maroantsetra. Mpandeha iray no fantatra fa namoy ny ainy hatramin’izao.
Lakana iray fiampitan’ny olona any Maroantsetra mankany Rantabe, rendrika tampoka teo amin’ny reniranon’i Mahasoa, omaly maraina. Araka ny vaovao avy any an-toerana, olona valo nentin’io lakana io, izay nahitana zandary iray komandin’ny Poste avancé avy any amin’ny kaominina Rantabe. Navadiky ny rano ilay lakana, ka latsaka avokoa ireo mpandeha valo. Araka ny vaovao avy amin’ny zandary, olona efatra avotra soa aman-tsara ary vehivavy iray fantatra fa vadin’ilay kaomandà no hita efa tsy nisy aina intsony. Tsy mbola hita popoka kosa ilay zandary sy ireo telo hafa.
Raha ny fanazavana avy any an-toerana, mandeha lakana ny olona miampita io ranobe io amin’izao fotoana izao, noho ny fahafatesan’ny baka sy ny tsy fisian’ny solika. 1.000 Ar ny saran-dalana fiampitana, ary afaka itondrana entana ihany koa izy io. “Misy mitondra entana mavesatra amin’ny lakana amin’izany”, hoy ny filazan’ny olona any an-toerana.
Tsy nisy nanam-po ity loza, omaly, ity satria efa fahazaran’ny mponina ny miampita lakana eo rehefa tsy nihetsika intsony ny baka. Nisamboaravoara tampoka ny rano ka nahazaka ny lakana niampitan’ireo olona avy any Maroantsetra. Tonga tany an-toerana ny tompon’andraikitra avy any Maroantsetra nizaha ity toe-javatra mampalahelo ity. Natao ny asa famonjena sy ny fanavotana ireo mpandeha, saingy izao mbola misy tsy hita popoka izao.
Tsy ara-dalàna, fahazarana
Anisan’ny mampiverimberina ny loza an-dranomasina sy ny an-dranomamy, ka ahafatesana olona tahaka izao, ny tsy fahampian’ny fitaovana fampiasan’ny olona amin’ny fiampitana rano. Tahaka ity izao, tsy mandeha ny baka, kanefa ny lakana fiampitan’ny olona tsy manara-penitra, na ny aro-loza mifanaraka amin’izany fotsiny aza. Entim-pahazarana fotsiny ny rehetra miampita lakana tsy manana eritreritra fa mety hitranga tampoka ny loza. Tsy voalohany rahateo ity tranga ity, ary mety mbola hiseho izany raha tsy misy ny fepetra raisain’ny manampahefana.
Manana andraikitra amin’izany ny fanjakana, mba hijery ny fitaovana ampiasain’ny olona amin’ny fiampitana ny rano. Famatsiana fitaovana, fanaraha-maso, sns.